किन पोल्छ पेट ? पेट पोल्ने समस्याबाट मुक्ति पाउन यसाे गर्नुहाेस
पेट पोल्ने कारणहरु धेरै भएपनि हामी धेरैलाई हुने मुख्य कारण भनेको ग्यास्ट्राइटिस, रिफल्क्स आदि नै हो । पेटमा बन्ने एसिडको मात्रा धेरै भएमा वा पेट भित्रको एसिडबाट बचाउ गर्ने तह कमजोर भएमा यसले पेट पोल्ने गराउँदछ । कुनैबेला पेटबाट माथि खाना जाने नली हुँदै घाँटीसम्म एसिड पुग्ने भएकाले छाती पोल्ने र अमिलो पानी आउने पनि गर्दछ । पेटको अल्सर भएमा पनि यसले पेट पोल्ने समस्या देखिन सक्छ । खाना समयमा नखाने, अमिलो, पिरो, चिल्लो बढी खाने, धेरै मानसिक तनाव लिने आदि मानिसहरुमा यो समस्या धेरै देखिन सक्छ ।
नामको पहिलो अक्षरले बताउँछ कुन मानिस कस्ता हुन्छन् ! थाहा पाउनुहोस् तपाई कस्तो खालको व्यक्ति
के तपाईलाई गिजाबाट रगत आउने समस्या छ ? यस्ता छन् घरेलु उपचार (भिडियो)